ForexMT4Systems - အခမဲ့ Forex မဟာဗျူဟာနှင့် MT4 ညွှန်းကိန်း Download
အခမဲ့ Forex မဟာဗျူဟာနှင့် MT4 ညွှန်းကိန်း Download
Forex Trading ၏စနစ်များ
Bollinger တေးဂီတအဖွဲ့များ Forex မဟာဗျူဟာ
မီးခွက် Forex မဟာဗျူဟာ
ဇယားပုံစံများ Forex မဟာဗျူဟာ
Forex Breakout မဟာဗျူဟာ
မဏ္ဍိုင်ပွိုင့် Forex မဟာဗျူဟာ
Renko ဇယား Forex မဟာဗျူဟာ
ပံ့ပိုးမှု & Resistance Forex မဟာဗျူဟာ
ထရေးဒင်း Forex မဟာဗျူဟာလွှဲ
မတည်ငြိမ်မှု Forex မဟာဗျူဟာ
binary Options ကိုမဟာဗျူဟာ
binary Options ကိုညွှန်းကိန်း
Forex MT4 စနစ်များ 2018 ရန်သင်ကကြိုဆို,
တစ်ဦး Forex Trading ၏မဟာဗျူဟာကဘာလဲ?
A Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ မဆိုပေးထားသောအချိန်မှာငွေကြေးတစ်စုံကိုဝယ်သို့မဟုတ်ရောင်းဖို့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်တစ်ဦး Forex ကုန်သည်ကအသုံးပြုတဲ့ technique ကိုဖြစ်ပါတယ်။ Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ဇယားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသို့မဟုတ်အခြေခံ, သတင်း-based ဖြစ်ရပ်များအပေါ်အခြေခံပြီးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါကုန်သည်ရဲ့ငွေကြေးကိုကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာအများအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များရောင်းမဝယ်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများ၏ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါကသူတို့တစ်တွေအခြို့သောကြေးအဘို့, ကုန်သည်သို့မဟုတ်ရောင်းချသူကဒီဇိုင်းနိုင်ဆိုလို။ တစ်ဦးက Forex မဟာဗျူဟာတစ်ခုကို manual သို့မဟုတ် automated ကုန်သွယ်စနစ်၏ form မှာလာနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးကလက်စွဲကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာသူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ထိုကဲ့သို့သောပုံစံများဘို့စောင့်ဆိုင်းရန်သူ၏ကွန်ပျူတာများ၏ရှေ့မှောက်၌ထိုင်နေစဉ်သူ, စျေးနှုန်း / ညွှန်ပြချက်ပုံစံပေါ်တွင် အခြေခံ. ချမှတ်ရန်လိုအပ်သည်ရဲ့တစ်ပြီးသား set စိုးမိုးရေးသို့မဟုတ်ခွအေနအေရှိခြင်းကုန်သည်ပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ အတော်များများကကုန်သည်များကိုသုံးပါ techninal ညွှန်းကိန်း သူတို့ရဲ့လက်စွဲစနစ်များကိုဖွံ့ဖြိုးရန်။ အဆိုပါကုန်သည်ကဝယ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရောင်းသတိပေးချက်ရှိမရှိပြန်ဆိုခြင်းအားဖြင့်ပုံစံချွတ်သဘောမျိုးလုပ်လိုအပ်ပါသည်။ automated မဟာဗျူဟာ တစ်ဦး automated မဟာဗျူဟာ, အခြားတစ်ဖက်တွင်, ပိုကောင်းတဲ့အဖြစ်လူသိများနောက်ပိုင်းတွင်ဆော့ဖ်ဝဲသို့ပုံသွင်းထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေသို့မဟုတ်အခြေအနေများနှင့်အတူတစ် algorithm ကို, ဖြစ်ပါတယ် Forex စက်ရုပ် (EA) အ။ အများစုမှာ automated စနစ်များ Metatrader4(MT4) ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ ထိုသို့အားဖြင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်စားအရောင်းအဝယ်ဖြစ်, သင့်ဇယားပေါ်သို့ပလပ်နိုင်ပါသည် - ကကုန်သည်များအတွက်ရောင်းမဝယ်အမိန့်အစပျိုးဖို့လုံလောက်တဲ့အစွမ်းထက်သည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်ကိုအလွန်ကုန်သည်များတွေအများကြီးထဲမှာချောမွေ့ကုန်သွယ် hampers ကြောင်းစိတ်ပညာ၏လူ့ခြမ်းပပျောက်ဖို့ဆိုပါတယ်။
အခမဲ့ Forex Trading ၏မဟာဗျူဟာ
သုံးစွဲဖို့ Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ၏ထားတဲ့အမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်းအခါ, သငျသညျ options နှစ်ခုရှိသည်:
သင်ဤ site ပေါ်တွင်အခမဲ့ Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများမဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်နှင့်သူတို့အထဲကစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
paid Forex ကုန်သွယ်စနစ်များနှင့်အတူဒုက္ခကြောင့်ဖြစ်ပါသည်:
သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်စတိုင် fit ပါဘူးတဲ့ Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာဝယ်ယူအပေါ်ပိုက်ဆံတွေအများကြီးသုံးဖြုန်းနိုင်ပါ။
နောက်ပိုင်းတွင်သင်သည်သင်၏ကနဦးညှို့ချွတ်ဝတ်ဆင်ရန်စတင်သည်တစ်ချိန်ကသင်ကသုံးပြီးမည်မဟုတ်ပါဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး fit ပါဘူးနားလည်သဘောပေါက်မျဉ်းကိုချ။ ပိုက်ဆံစွန့်ပစ်။
အခမဲ့ Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများနှင့်အတူ:
သင်သည်ထိုသူတို့အဘို့အပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲသူတို့အားထွက်စမ်းသပ်ရန်နှင့်နောက်ဆုံးမှာသင်ကိုက်ညီမယ့်ကုန်သွယ်မှုစနစ်ကိုရှာဖွေရန် option ရှိသည်။
အခမဲ့ Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ Forex အတွက်ငွေရှာနိုင်ပါတယ်။
စိတျထဲတှငျကြောင်းနှင့်အတူ, ဒီ Forex က်ဘ်ဆိုက်ပေါင်းရာနှင့်ချီရှိပါတယ် Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများ အဆင့်မြင့်ကုန်သည်များမှစတင်ကနေကုန်သည်များကအမျိုးမျိုးတို့ကိုအဘို့။
Forex ဦးရေပြား အများကြီးနိမ့်အချိန်ပြကွက်အပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်တစ်ဦးကမဟာဗျူဟာ 1-မိနစ်နှင့် 5-မိနစ်အချိန်ပြကွက် ie, တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် Forex ဦးရေပြားကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ။ Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ၏ဤအမျိုးအစားတိုင်းကုန်သွယ်ရေးအပေါ်သေးငယ်တဲ့အမြတ်အစွန်းများအတွက်စျေးကွက်ဥပမာ5pips များအတွက်, 10 pips ထဲသို့ဝင်ဒါမှမဟုတ် 15 အမြတ်အစွန်း pips scan ဖို့ဒီဇိုင်းနေကြသည်။ အဘယ်အရာကိုဤနည်းဗျူဟာမကတက်ကဆက်ပြောသည်သည့်အခါအားဖြင့်အကြီးအကျယ်အကျိုးအမြတ်အလျှော့ပေးလိုက်လျောခြင်း, ကုန်သွယ် session ကိုဖြတ်ပြီးထိုကဲ့သို့သောအရောင်းအပုံတူပွားသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤတွင်များ၏စာရင်းများမှာ Forex ဦးရေပြားစနစ်များ ဒီ site ပေါ်တွင်:
Forex Doske ဦးရေပြားစနစ်
Forex Perky ဦးရေပြားထရေးဒင်းစနစ်
Forex XXL စူပါဦးရေပြားထရေးဒင်းစနစ်
Forex Stochastic MTF ဦးရေပြားမဟာဗျူဟာ
Forex စူပါ MA RSI ဦးရေပြားမဟာဗျူဟာ
Forex CCI Supertrend ဦးရေပြားမဟာဗျူဟာ
Forex ဦးရေပြား Forex ကုန်သည်အချို့ကိစ္စအပေါ်မိနစ်သို့မဟုတ်စက္ကန့်အတွင်းကုန်သွယ်ရေးနှင့်ထွက်ပေါက် ပေး. စီရင်တဲ့နေ့ကကုန်သွယ် technique ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦး Forex ဦးရေပြားကုန်သည်, သင်ကြီးမားတဲ့အမြတ်အစွန်းပစ်မှတ်ရှာနေကြသည်မဟုတ်သည့်အခါဒါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့, သငျသညျ5pips, 1o pips သို့မဟုတ်ပင် 15 pips တူသောကုန်သွယ်မှုနှုန်းအလွန်သေးငယ်တဲ့အမြတ်အစွန်းပစ်မှတ်ရှာကြ၏။ သငျတို့သညျဤအသေးအမြတ်အစွန်းပစ်မှတ်နှင့်အတူကုန်သွယ် session ကိုတစ်လျှောက်လုံးအများအပြားအရောင်းအယူဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်။ ဒါကြောင့်အဘယျသို့ '' Forex ၏အချက်ထို့နောက် scalping? ကောင်းပြီ, ဒီမှာ '' အရာ: အ FX scalper ၏ရည်မှန်းချက်ကုန်သွယ် session ကိုတစ်လျှောက်လုံးအများအပြားအရောင်းအလုပ်များနှင့်အဆုံး၌, ရှိသမျှသောသူတို့သည်သေးငယ်တဲ့အမြတ်အစွန်းတက် add နှင့်မြှုတ်သည့်ကုန်သွယ်ဆုံးရှုံးမှုကျော်လွန် (နှင့်အဘို့အပြန့်ပွားကုန်ကျစရိတ်ဂရုစိုက်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် ကုန်သွယ်) ။ သူတို့ကအရမ်းသေးငယ်တဲ့အမြတ်အစွန်းအဘို့အသွားမမှတ်ကြည့်ရှုနှင့်မြင့်မားသောဖိအားကုန်သွယ်ပတ်ဝန်းကျင်၏ဤမျိုးနှင့်အတူပါဝင်လျက်ရှိနေသောကြောင့်အတော်များများက Forex ကုန်သည် scalping Forex ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ရယ်စရာအရာကြောင့်ယုန်ဖြစ်ပါတယ် Forex scalping တူသောပြုအများအပြားကုန်သည်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျစိတ်ဝင်စားလျှင်, ဤ Forex က်ဘ်ဆိုက်မှာလည်းသူတို့ကိုသင်ထွက်စစ်ဆေးနှင့်သင်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်ကြိုးစားပြီးနိုင်သည့် Forex ဦးရေပြားမဟာဗျူဟာရှိပါတယ် ဒီမှာ.
ထရေးဒင်းသတင်းအဖြစ်ကောင်းစွာအမြတ်အစွန်းနှင့်အလွန်အန္တရာယ်များနှစ်ဦးစလုံးဖွစျနိုငျပါတယျ။ သငျသညျအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုသိမထားဘူးဆိုရင်, သတင်းကုန်သွယ်မှုပါဘူး။ စျေးနှုန်းဒီတော့အစာရှောင်ခြင်းသင်ထွက်ဖမ်းမိပါလိမ့်မည်သင်တို့တဘက်၌ရွှေ့နိုင်သောကြောင့်သင်တို့ကိုမိနစ်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းသင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အကောင့်သုတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ကအဓိကစီးပွားရေးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအထဲကဖြစ်ရန်စီစဉ်ထားကြသည်ဘယ်အရာကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ပြီးတော့သတင်းကုန်သွယ်မှုသို့မဟုတ်ပဲရိုးရှင်းစွာစောင့်ဆိုင်းပြီးတော့ဖြန့်ချိသည်တိုင်အောင်သင်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်းလျှင်ဆုံးဖြတ်မတိုင်မီနေ့စဉ်စစ်ဆေးရန်, ဤသည်နေ့ရက်ကာလထို့နောက်၎င်း၏အကောင်းဆုံး Forex သတင်းကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများသုံးပြီးနှင့်မနေလျှင် အခြားသောနေ့ရက်ကိုအဘို့။
Beginners များအတွက် (အခြေခံပညာ) ရိုးရှင်းသော Forex Trading ၏မဟာဗျူဟာ
သင်တစ်ဦးအစပြုသူမှန်လျှင်တစ်ဦးရှုပ်ထွေးပြီးအဆင့်မြင့် Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာရှိခြင်းသင်သည်ထဲက heck ရှုပ်ထွေးပါလိမ့်မယ်။ ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ! အဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်အခြေခံ Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများဖြစ်ကြပြီးတက်အဲဒီမှာမှသင်၏လမ်းအလုပ်လုပ်နှင့်အတူစတင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားကယ့်ကိုလွယ်ကူပါတယ် Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများဖြစ်ကြသည်။ ဖြစ်လျက်ရှိတစ်ဦး အခြေခံ Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ သူတို့အသုံးမရသောကုန်သွယ်စနစ်များဖြစ်သွားကြသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ဤနေရာတွင်ရိုးရှင်းသောသည်ဤ Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ၏ကုန်သွယ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုနားလည်နှင့်သင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ကြသောအခါ execute မှတကယ်လွယ်ကူပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုဆိုလိုသည်။ သငျသညျရောထွေးဖို့အများကြီးအခြေအနေများသို့မဟုတ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိပါ။ ဤအအရင်ကဆိုရင်များအတွက်သင့်လျော်သော Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများဖြစ်ကြသည်ဒါကြောင့်ပါပဲ။ ဤရွေ့ကားကုန်သွယ်မှု Forex မှစတင်ကြသူအရင်ကဆိုရင်များအတွက်သင့်လျော်သောကယ့်ကိုရိုးရှင်း Forex ကုန်သွယ်စနစ်များဖြစ်ကြသည်။ ရိုးရှင်းဖြစ်ခြင်းကဤ Forex မဟာဗျူဟာအမြတ်အစွန်းမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုမဆိုလိုပါ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ရိုးရှင်းသော Forex ကုန်သွယ်စနစ်များကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ကြပြီးအလွန်အမြတ်အစွန်းရှိနိုင်ပါသည်။ သင်က၏ Hang ရပြီးတာနဲ့, ထို့နောက်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Forex ကုန်သွယ်စနစ်များကိုဖွံ့ဖြိုးရန်စတင်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကြိုတင် Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများနှင့်ပင်စျေးနှုန်းအရေးယူ Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများပေါ်တွင်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးအစပြုသူ Forex ကုန်သည်ဖြစ်ကြပါလျှင်, သင်အမှန်တကယ်အပေါငျးတို့သညျအခွားပစ္စည်းပစ္စယတွေနဲ့သိပ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရောထွေးချင်ကြပါဘူး ... ကိုယ့်တစ်ဦးအနေဖြင့်တစ်ဦးရိုးရှင်းသော Forex ကုန်သွယ်စနစ်နှင့်သရုပ်ပြကုန်သွယ်မှုကထွက်ရှာပါ။ အဘယ်အရာကိုသင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အရိုးရှင်းဆုံး Forex ကုန်သွယ်စနစ်များငွေရှာနိုင်သောသူများဖြစ်ပါတယ်။ အထဲက Find, အဲဒါကိုကပ်နှင့်သင့်လျော်သောကုန်သွယ်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူ၎င်း၏ကုန်သွယ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှကပ်အားဖြင့်သင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ်အောင်ကြိုးစားပါ။ စျေးလှုပ်ရှားမှု စျေးအရေးယူကုန်သွယ်အမိန့် execute မှမီးခွက်, ဇယားပုံစံများ, ထောက်ခံမှုများနှင့်ယဉ်ပါးအဆင့်ဆင့်၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြု. ရိုးရိုးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကုန်သွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့စျေးနှုန်းအရေးယူကုန်သွယ်ဖြစ်စေရန်, သငျသညျကိုဘယ်လိုစျေးနှုန်းအရေးယူသီအိုရီနှင့်မည်သို့အစစ်အမှန်အချိန်အတွက်ကြောင့်ကုန်သွယ်မှုတစ်ဦးအစိုင်အခဲနားလည်မှုရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤတွင်များ၏စာရင်းများမှာ Forex စျေးနှုန်းအရေးယူစနစ်များ ဒီ site ပေါ်တွင်:
Forex စျေးလှုပ်ရှားမှုပံ့ပိုးမှု Resistance ထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာ
Forex EMAS စျေးလှုပ်ရှားမှုဦးရေပြားမဟာဗျူဟာ
Forex စျေးလှုပ်ရှားမှု Channel ကိုဦးရေပြားမဟာဗျူဟာ
Forex Fractal စျေးလှုပ်ရှားမှု PPR Indicator
တစ်ဦးက Forex Trading ၏မဟာဗျူဟာ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော Element တွေကို
တစ်ဦး Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ (system ကို) ကဘာလဲ? တစ်ဦးက Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာရိုးရှင်းစွာအခြို့ဈေးကှကျအခြေအနေများအမြတ်ရစေနိုင်ရန်အတွက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကြသောအခါဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းဖို့အခါသင်ပြောပြစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအစုတခုဖြစ်ပါတယ်။ မဆို Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာသည်ဤ4core ကိုရှိသော်လည်းအခြေခံဒြပ်စင်ရှိသင့်:
ရောင်းမဝယ်ရန်သင့်အားဖြစ်ပေါ်သင့်ကြောင်းအခြေအနေကို (s) ။
ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦး Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာသောအရာကိုတစ်ဦး၏အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ။ ဤအ core ကိုဒြပ်စင်၏တစုံတယောက်သောသူသည်ရှိသည်မဟုတ်ပါဘူး aa ကုန်သွယ်မှုစနစ်လျှင်, သင်အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်ရှုပ်ထွေး left ခံရဖို့သွားနေကြပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာထားရန်, Forex စျေးကွက်ဖရိုဖရဲဖြစ်ဟုဆိုသည်နိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးဖရိုဖရဲဈေးကွက်ထဲမှာအမိန့်ရှိသည်, သင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေရှိတယ်။
အများကြီးပိုပြီးလည်းရှိပါတယ် Forex မဟာဗျူဟာအရင်းမြစ်များ ပါဝင်သည်သောဤ Forex က်ဘ်ဆိုက်အတွင်း:
Forex Trading ၏မဟာဗျူဟာဒါကလုပ်ငန်းခွင်
တိုင်း Forex ကုန်သည်သင်သည်အဘယ်သို့ကြိုက်တယ်ငါဘာကြိုက်တယ်ဆိုတာမဟုတျပါဘူး ... ကွဲပြားခြားနားသည်။ သင်သည်အဘယ်သို့ထင်ငါ့အဘို့အကောင်းဆုံးကို Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာတူလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဖြစ်ပါတယ်။ ဤမေးခွန်းကိုဦးချင်းစီတဦးချင်း Forex ကုန်သည်များအတွက်ကျန်ရစ်ရ၏။ သငျသညျထို (ကျနော့်အမြင်၌) သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာပါလိမ့်မယ် ... သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်သောအခါအသင်ပြုကိုက်ညီသော Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာကိုရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်, သင်တို့အဘို့ရှာကြသည်လျှင် အလုပ်လုပ်သော Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများရုံတစျခု system ကိုအလုံးစုံတို့အဘို့အလုပ်မလုပ်လို့မရဘူးနားလည်ပါသည်။ ငါစျေးနှုန်းအရေးယူကုန်သွယ်ကြိုက်နှစ်သက်ပေမဲ့သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်မှုစနစ်အတွက်ညွှန်းကိန်းအသုံးပြုလိုပေမည်။ သငျသညျသုတေသနနှင့်စမ်းသပ်မှုသည်ခန္ဓာကိုယ်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်နည်းဗျူဟာများနှင့်စနစ်များရိုးရိုးသင်တို့အဘို့အလုပ်မလုပ် Forex ကုန်သွယ်အမျိုးအစားထွက်ရှာရန်လိုအပ်သည်။ သငျသညျ I'f ပျမ်းမျှအား Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများရွေ့လျားလိုပဲဒီ site ပေါ်တွင်သူတို့ကိုအများကြီးရှိပါတယ်။ သငျသညျ Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာ scalping ကြိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒီမှာဖို့ရှိပါတယ်။ သငျသညျသတင်းကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, သူတို့ကဒီမှာဖို့ရှိပါတယ်။ သငျသညျနေ့ကကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများနှင့်စနစ်များကိုကြိုက်သည်မှန်လျှင်, ရန်ဒီနေရာကိုရှိပါတယ်။ သငျသညျလွှဲကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများနှင့် system ကိုကြိုက်သည်မှန်လျှင်, ဒီမှာမဟာဗျူဟာများအများအပြားလွှဲကုန်သွယ်စနစ်များဖြစ်ကြသည်။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းတဦးတည်းကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့အ Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာအလုပ်ကြောင့်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်မယ့် Forex system ကိုရှာမတှေ့ဘူးလျှင်မူကားရှိတဦးတည်းသောသင် "ကဲ့သို့၏မျိုး" ရဲ့သို့သော်တကယ် fit..then အဘယ်ကြောင့် tweaks မဟုတ်ဘဲနေရသနည်း အဘယ်ကြောင့်သင်နှင့်အတူကျေနပ်မှုရှိပါသလဲတစ်ကုန်သွယ်မှုစနစ်လုပ်ပြီးရင် "ဒီကုန်သွယ်မှုစနစ်" နဲ့ "ကြောင်းကုန်သွယ်မှုစနစ်" မှအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောကုန်သွယ်နည်းစနစ်သို့မဟုတ်အတွေးအခေါ်များပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲမဟုတ်လော ဘယ်သူမှသင်ရပ်တန့်သွားပါတယ်။ အခုဆိုရင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းကိုသင်၏ Forex မဟာဗျူဟာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ပြီးနောက် ... သင်ကလာမယ့်ဘာလုပ်မလို့ပြောပေးနိုင်ပါတယ်? ကောင်းပြီ, တစ်ဦး Forex ပွဲစားနဲ့သရုပ်ပြကုန်သွယ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကတိုက်ရိုက်စျေးကွက်အခြေအနေများအတွက်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့စနစ်အထဲကစမ်းသပ်။ ဒါကသင် Forex ကုန်သွယ်မှုစနစ်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုသိတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများနှင့်စနစ်များသည်ဤ site ပေါ်တွင်ကောင်းတဲ့ကိုကြည့်စေခြင်းငှါသင်တို့မူကားကုန်သွယ်မှုစနစ်အပေါ်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်, သင်အမှန်တကယ်ကထွက်စမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျကျေနပ်မှုရှိပါသလဲင့်ကိုတစ်ကြိမ်ထို့နောက်ထို့နောက်သင်အမှန်တကယ်ငွေနှင့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါပျော်စရာစတင်ရှိရာ ... တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှငွေနှင့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ဒါကဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဘယ်နှစ်ယောက် Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများလိုအပ်သလဲ? သငျသညျကုန်သွယ် setup ၏တစ်ဦးတည်းသာအမျိုးအစားကုန်သွယ်မှုပိုနှစ်သက်လျှင်သင်သာ Forex ကုန်သွယ် system ပေါ်တွင်လိုအပ်ချင်ပါတယ်။ သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်အခြေအနေများကုန်သွယ်မှုလိုလျှင်မူကားထို့နောက်ကွဲပြားခြားနားသောစျေးကွက်အခြေအနေများအသီးအသီးအဘို့အများအပြားအစိုင်အခဲ Forex ကုန်သွယ်စနစ်များရှိခြင်းမရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ Forex ဥပမာ:
စျေးကွက်တစ်ခုလမ်းကြောင်းသစ်၌တည်ရှိ၏လျှင်, သင်တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်ကုန်သွယ်မှုစနစ် အသုံးပြု. ရမည်ချင်ပါတယ်
ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့တကယ်ဆုံးဖြတ်ဖို့ Forex ကုန်သည်အထိ။ သငျသညျအစပြုသူ Forex ကုန်သည်များဖြစ်ကြသည်လျှင်, ငါသည်သင်ရုံတစ်ဦးတည်းသာ Forex ကုန်သွယ်ကောက်နှင့်ကကပ်အကြံပြုအပ်ပါသည်။
နေ့ထရေးဒင်း vs အရောင်းအဝယ်ဖြစ်လွှဲ?
တိုင်း Forex ကုန်သည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ တိုတောင်းအချိန်ဘောင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နှင့်မျိုးကဒီမှာကစားသို့ကြွလာနေ့ကကုန်သွယ် technique ကိုဆိုလိုသည်တိုတောင်းကာလအဘို့အပွင့်လင်း၎င်းတို့၏ကုန်သည်များစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်တူအချို့က။ ထိုအခါမူကားလွှဲကုန်သည်များဖြစ်ကြောင်း Forex ကုန်သည်များရှိပါတယ် ... ကုန်သည်တွေကုန်သွယ်မှု ယူ. ရေရှည်အလားအလာတစ်အများကြီးအလတ်စားရှိသည်သောသူတို့အားကုန်သည်များဖြစ်ကြသည် Swing ။ ဒါကကုန်သွယ်ရေးဖွင့်နိုင်ပါသည်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ထားသည်ရှေ့တော်၌တပတ်သို့မဟုတ်ပင်လတစ်ရက်ယူစခွေငျးငှါကိုဆိုလိုသည်။ ယူစေခြင်းငှါ, အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး ... ကုန်သည်တွေထွက်ကစားရန်ကုန်သွယ်မှုများအတွက်စောင့်ဆိုင်းလိုလွှဲတကယ်စျေးနှုန်းအရေးယူမှုနှင့်စျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်မူတည်ပါသည်။ လွှဲကုန်သွယ်၏အားသာချက်ထို့ကြောင့်အချက်ဖြစ်ပါသည် (ထိုနေ့ကကုန်သည်များ၏ဒိုမိန်းဖြစ်သော) သေးငယ်အချိန်ပြကွက်အပေါင်းတို့၌အသေးစားစျေးနှုန်းအတက်အကျကိုလျစ်လျူရှုသည်နှင့်တစ်ဦးပိုမိုကြီးမားရေရှည်အမြင်ထားရှိကြောင်းချင်းစီကုန်သွယ်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်, ထို။ လွှဲကုန်သွယ်၏အားသာချက်ထိုနေသောခေါင်းစဉ်:
အရောင်းအမကြာခဏလွှဲအများဆုံးကိစ္စများတွင်နေသောအချက်များ, ပစ္စုပ္ပန်တကယ်အနိမ့်အန္တရာယ်မြင့်မားဆုလာဘ်ကုန်သွယ်မှု entry ကိုရမှတ်အနည်းဆုံးထဲသို့ဝင်နေကြသည်။
မြင့်မားတဲ့ဖိအားနဲ့ hectic ကုန်သွယ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် Setup အဘို့သင့်ကုန်သွယ်ဇယား scan ဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်တပ်လှန့်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ဦးရေပြားကိုလည်းနေ့ကကုန်သွယ်၏အလွန်တိုတောင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ် ... ဒါကြောင့်ဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုမိနစ်သို့မဟုတ်စက္ကန့်ကြာနေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးကိုပိတ်ဖို့နိုင်ပါတယ်။
ကုန်သွယ်ရေး Forex ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်နာရီ?
ယင်း၏အများကြီးပို FX စျေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုများနှင့်အရှိန်အဟုန်ရှိပါတယ်အခါ Forex စျေးကွက်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ငွေရှာဖို့ပိုမိုလွယ်ကူ ... ထင်မြင်ချက်များကွဲပြားစေခြင်းငှါမဟုတ်တဦးတည်းအရာအချို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့မှကြွလာသောအခါ, ဒါကြောင့်, များစွာသော Forex ကုန်သည်များလန်ဒန်ကြိမ်မြောက်နှင့်နယူးသင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအတွင်း Forex စျေးကွက်ရောင်းဝယ်ဖောက်လို။ Forex ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာကြီးမားအသံအတိုးအကျယ်ကို New သင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအားဖြင့်လာမယ့်နောက်တော်သို့လိုက်ရာနေ့စဉ်လုပ်နေကြသည်ရှိရာလန်ဒန် Forex session တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အာရှ Forex ကုန်သွယ် session တစ်ခုခုနှစ်တွင်၎င်း၏အများဆုံးမကြာခဏတစ်နေ့တာအတွင်းပါးလွှာ volumes ကိုကြုံတွေ့နေရသည်။ လန်ဒန် FX နာရီအတွင်းဒါမှမဟုတ်နယူးသင့် Forex ကုန်သွယ် session တစ်ခုအတွင်းမှာကုန်သွယ်ရေး Forex မှကျနော့်အမြင်တွင်၎င်း၏အကောင်းဆုံး။
ကျွန်တော်တို့၏ အကြံပြု Forex MT4 ညွှန်းကိန်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုထဲမှ:
ကုန်သွယ်ရန်ငွေကြေးကို pair တစုံရွေးချယ်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဤတွင်အဘယ်ကြောင့်ဖွင့်:
အချို့ငွေကြေးအားလုံးကောင်းစွာ Trends ပါဘူး
အချို့ငွေကြေးအားလုံးသာဥပမာ, တစ်နေ့တာအတွင်းအချို့သောကြိမ်အတွင်းကောင်းစွာ Trends လန်ဒန်နှင့်သင့်ကုန်သွယ် session ကိုသစ်ကို။
အချို့ငွေကြေးအားလုံးအချို့ Forex ပွဲစားများနှင့်အတူ 3-5 pips ၏ပိုလျှံအတွက်အလွန်ကြီးမားန်ရှိသည်နှင့်သင်တဦးတည်းစံစာချုပ်ကုန်သွယ်မှုလျှင်သင်တစ်ဦးကုန်သွယ်ရေးနှင့်စျေးနှုန်းရိုက်ထည့်ပြီးနောက်ကြောင့်ချက်ချင်းအကြမ်းဖျင်း $ 10- $ 50 အရှုံးဖွင့်၌ဤအများကြီးအားဖြင့်ရွှေ့ဖို့ရှိပါတယ် ကြောင်းကုန်သွယ်မှု breakeven စေရန်သင့်ကုန်သွယ်မှု၏ညှနျကွား။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြု Forex ဆောင်းပါးများ:
အဘယ်ကြောင့်နည်းပညာပိုင်းအားသုံးသပ်ခြင်းအဆိုပါ Forex Market ကခုနှစ်မှာကောင်းပြီအလုပ်လုပ်
အဘယ်ကြောင့် Forex စတော့ရှယ်ယာများသို့မဟုတ် Commodities ထက်ပိုကောင်းတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု Idea Is
ထရေးဒင်း Mini ကိုအများကြီးကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိ၏ Difference ကဘာလဲ Forex အတွက် full-size အများကြီး
တစ်ဦးက Forex Carry ကုန်သွယ်ရေးကိုနားလည်ခြင်း
အဆိုပါ Forex Market ကခုနှစ်မှာထရေးဒင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်
အဆိုပါအကောင်းအဆိုး cons တစ်ဦး Forex Trading ၏ဆန္ဒပြအကောင့်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်၏
အဆိုပါ Forex Market ကနှင့်၎င်း၏အောင်မြင်နိုင်သည့်အလားအလာ,
Forex Trading ၏ခုနှစ်တွင် Elliott သည် Wave ကိုသီအိုရီ
အဆိုပါ Forex Market ကခုနှစ်မှာပံ့ပိုးပြီးတော့ Resistance
ဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ Forex အရှုံး Minimize စေရန်နားလည်တတ်ကျွမ်း Tactics
အမြတ်အစွန်း Forex မဟာဗျူဟာနှင့်နည်းပညာ
Forex အတွက်မဏ္ဍိုင်အမှတ်: စီမံလျာထားခြင်းသင့်ရဲ့အချိန် Frame က
အဆိုပါ Forex Market ကပျမ်းမျှ Moving
ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Forex Trading ၏
လီယိုနာဒို Fibonacci ပြီးတော့ Forex Trading ၏
Forex Trading ၏သန့်ရှင်းသောဘုရား Grail?
အဆိုပါ Forex ကုန်သွယ်၏သန့်ရှင်းသောအ grail ပိုက်ဆံစီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်ပါသည်။ တခါတရံမှာထရေးဒင်းအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ သင်မှန်စည်းကမ်းဖြစ်ခြင်းနှင့်လက်ျာအရာလုပ်နေသဖြင့်ဒီတစ်ခုရရှိရန်နှင့်သင်သည်အဘယ်သို့ကြောင့်မြင်ရပါလိမ့်မည် သငျသညျကောငျးမှပိုက်ဆံကုန်သွယ် Forex အောင်စတင်ပါလိမ့်မည်ရှေ့မှာအချိန်ကသာတဲ့ကိစ္စပါပဲ။ အဘယ်အရာကို Forex ကုန်သွယ်အကောင့်အသစ်များ၏သန်းပေါင်းများစွာမှုတ်ငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီညာဘက်ရတဲ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကြီးထွားဖို့အသိပါစေဘဲနေရသနည်း သင်တို့ကိုတွေ့မြင်မရှိ Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာသင် 100% အောင်မြင်မှုနှုန်းကိုငါပေးမည်။ အဘယ်သူမျှမ။ ကုန်သွယ်ရေးထားပြီးတာနဲ့သင်ကစျေးကွက်စျေးနှုန်းကိုထိန်းချုပ်အဘယ်မှာယင်း၏လာမယ့်သွားရမယ့်လို့မရဘူးကြောင့်၎င်း, သင်လိုချင်သည့်ရလဒ်ကိုအာမခံမပေးနေပါသည်! သငျသညျထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝယ်လိုအားဝယ်လက်နှင့်ရောင်းသူ၏စျေးကွက်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့သနားတျောမူပါမှာဖြစ်တယ်။ သို့သော်သင်သည်အဘယ်သို့ထိန်းချုပ်နိုင်သည်အန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကသင်တစ်ဦးကုန်သွယ်မှုအကြွင်းမဲ့အာဏာထိန်းချုပ်ကျော်ရှိသည်တစ်ခုတည်းသောအရာ ... သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အန္တရာယ်ပါပဲ။ သင်တစ်ဦးကုန်သွယ်မှုအတွက်အန္တာရာယ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဘယ်လောက်သင့်အကောင့်၏ဆုံးဖြတ်။
အမြတ် Forex Trader Be
အတော်များများကကုန်သည်များစေနှင့်ငွေကုန်သွယ် Forex အများကြီးဆုံးရှုံး။ အဘယ်ကြောင့်လူ့စိတ်ခံစားမှုပါဝင်ပတ်သက်သည်ကို ထောက်. ... လောဘကြောက်ကစားသို့ဝင်ကြလော့။ သင့်ရဲ့တကယ်ပိုက်ဆံလိုင်းပေါ်သောအခါ, သင်ကုန်သွယ်ရေး Demo ချင်ပါတယ်နေချိန်မှာသင်ပြုဘယ်တော့မှချင်ပါတယ်အမှုတို့ကိုပြုလေ့ချင်ပါတယ်။ "အခု" အများကြီးကုန်သွယ်မှုနဲ့ငွေအများကြီးလုပ်ဖို့သွေးဆောင်မှုကို Forex ကုန်သွယ်အကောင့်အသစ်များ၏တဦးတည်းအကြီးမားဆုံးလူသတ်သမားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးထိန်းချုပ်ထားနှင့်သင့်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲဆင်းလာပါတယ်။ ဒီပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်သင်အွန်လိုင်းကုန်သွယ် Forex အတွက်ကြာရှည်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သငျသညျပိုက်ဆံကုန်သွယ် Forex စေနိုင်သလား?
ဟုတ်ကဲ့နှင့်အမှတ်ဒါကအံ့သြစရာအဖြေမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျကျိန်းသေငွေရှာနိုင်ပါတယ်။ ထိုအသင်တို့ကိုလည်းငွေအများကြီးဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ Forex ကုန်သွယ်အတွက်ငွေရှာဖို့လျှို့ဝှက်ချက်ကသင်၏ကုန်သွယ်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သင် fit တစ်ဦး Forex ကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာရှာဖွေတာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအရာအားလုံးဆီလျှော်သည်။ သင်သည်သင်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းချုပ်နှင့်သင့်ကုန်သွယ်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲနိုင်လျှင်, သင်ကောင်းစွာပြုလိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ကုန်သွယ်အန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်သံမဏိဘောလုံးရှိပါကသင်သည်ကဲ့သို့သင်တို့အ Forex ကုန်သွယ်ဖျက်ဆီးသောသူတို့အမှုအရာပပျောက်လျှင်ဟုတ်ကဲ့ ... တကယ်ကသင်သည်အမြတ်အစွန်းဖြစ်နိုင်သည်
သင့်ရဲ့ Forex ကုန်သွယ်မှုစနစ်ရဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအောက်ပါမဟုတ်
လက်ျာကုန်သွယ် Setup ကုန်သွယ်ရေးယူမီဖြစ်ပျက်ရန်အဘို့အသင်တစ်ဦးကုန်သွယ်မှုယူနေတဲ့ "အလုအယက်" ၌ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်ဆိုင်းနေမဟုတ်
သင်တစ်ဦးအသုံးမရသော Forex ကုန်သည်စေမည်နှင့်ထိန်းချုပ်မရလျှင်သင်ငွေအများကြီးဆုံးရှုံးနိုင်သော၎င်း၏ဤအရာတို့ကို။ တစ်ဦးစကားပုံရှိပါတယ် "ငါရန်သူမြင်ကြ ... နှင့်၎င်း၏ငါ့ကိုပါတယ်။ " ဤသည် Forex ကုန်သွယ်အတွက်အလွန်မှန်သည်။ က Forex ကုန်သွယ်ခြင်းငှါလာကြသောအခါအသင်သည်သင်၏အဆိုးဆုံးရန်သူဖြစ်တယ်။ သငျသညျသစ်ကိုကုန်သည်ဖြစ်ကြပါလျှင်, သင်သည်ဤတွေ့မြင်နဲ့ကျွန်မလဲလျောင်းတယ်ထင် ... ဒါပေမဲ့သင်တစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့ကုန်သွယ်အစစ်အမှန်ပိုက်ဆံပါတယ်နှင့်သင်သည်အဘယ်အရာကိုငါဖွင့်ဆိုပါတယ်မှန်ကိုသိရကြလိမ့်မည်မှီတိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကုန်သွယ်မှုနှုန်းဘယ်လောက်အန္တာရာယ်သလဲ? တဦးတည်းကုန်သွယ်နှုန်းအန္တာရာယ်သင့်တယ်ဘယ်လောက်အန္တရာယ်အကြောင်းကိုအတွေး၏ဤမျှလောက်များစွာသောကျောင်းများရှိပါတယ်။ သို့သော်ဤသတိရ: သင်တစ်ခုတည်းကုန်သွယ်မှုအတွက်သင့်အကောင့်ကိုပိုပြီးအန္တာရာယ်လျှင်သင်သည်သင်၏ Forex ကုန်သွယ်အကောင့်ထဲကအသုတ်နိုင်မီ, ကတာရှည်ယူမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမယ့်ကုန်သွယ်ရေးညာဘက်တတ်လျှင်အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်ပိုက်ဆံတွေအများကြီးစေနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်သင်ကရေရှည်အဘို့အ Forex အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြတယ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီကုန်သွယ်ရေး၌သင်တို့၏ကုန်သွယ်အကောင့်သေးငယ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းအန္တာရာယ်မှပြီးပြည့်စုံသောအသိကိုမှန်ကန်စေသည်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: ယင်း၏သင့်ရဲ့ Forex ကုန်သွယ်အကောင့်မှုတ်ဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောရှုံးနိမ့အလင်းတန်းများဖြာယူလိမ့်မယ်။ ဒီတော့အကောင်းဆုံး% အန္တရာယ်ကဘာလဲ ကျွန်မတစ်ဦးချင်းစီကုန်သွယ်ရေးအတွက်သင့်ရဲ့အကောင့် 1-2% အထိချောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ သင်ပင်ကုန်သွယ်မှုနှုန်း 5% အန္တရာယ်အဖြစ်တက်သွားလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ယူမယ်လို့အားလုံး5ဆက်တိုက်ရှုံးနိမ့အရောင်းအတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်သင့်အကောင့်မှထွက်သုတ်ပါလိမ့်မည်, ကုန်သွယ်ရေးနှုန်းတစ် 20% အန္တရာယ်နှင့်အတူသတိရပါ။ ပိုငျသကျပိုငျသညျကိုဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်သင်ပိုမိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အန္တာရာယ်။ သင်မှန်ကဒီအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဂိမ်းကစားနှငျ့သငျပိုက်ဆံကုန်သွယ် Forex တစ်တစ်တန်အောင်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အကြံပြု Forex သိကောင်းစရာများ:
သင်ဟာတစ်ဦးက Forex အကောင့်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုမီသိထားသင့်သောအရာတို့ကို
သင်က Forex ခုနှစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမပြုမီစဉ်းစားကြည့်ပါရန်အမှုအရာ
အဆိုပါ Forex Market က: မတူကွဲပြားထရေးဒင်း
အွန်လိုင်း Forex ငွေကြေးထရေးဒင်းခုနှစ်တွင်မကောင်းပါနေ့ရက်များရှောင်ကြဉ်ပါရန်တစ်ခုမှာကောင်းမွန်သောနည်းလမ်း
မတည်ငြိမ်သောအသုံးချပြီးအားဖြင့်ငွေ Forex Trading ၏ Make
Forex Trading ၏လေ့လာပါ - ပင်မစာမျက်နှာ မှစ. Forex Trading ၏အပိုင်းအချိန်အားဖြင့်တစ်ဦးဝင်ငွေခွန် Create ရန်ကဘယ်လို
သင်သိရှိရမည်5အရာ: Forex ဇယား Read ရန်ကဘယ်လို
တစ်ဦးကကောင်းမွန်သော Forex ပွဲစား Pick ရန်ကဘယ်လို
သင့်ရဲ့ Forex ငွေကြေးထရေးဒင်းစနစ်၏အများစုမှာထဲက Get လုပ်နည်း
ဘယ်လို Forex Trading အတွက်စမတ် Stop ပျောက်ဆုံးခြင်းရွေးချယ်ဖို့
အမြတ် Forex Trading သည်ဂရိတ်သိကောင်းစရာများ
Forex Trading ၏, အဘယ်သို့နာရီငါထရေးဒင်းများအတွက်အဆင်သင့်ရှိသင့်သလော
အကောင်းဆုံးအခမဲ့ MT4 ညွှန်းကိန်း Download
Forex Pairs ညွှန်းကိန်းအညွှန်းကိန်း
Forex Pairs ညွှန်းကိန်း ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
Forex Impulse MACD ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
ရိုးရှင်းသော Volume ကို Indicator Forex
ရိုးရှင်းသော Volume ကို Forex ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
Forex ဒျေါလီထရေးဒင်း Times သတင်းစာ Indicator
Forex ဒျေါလီထရေးဒင်း Times သတင်းစာ ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
Forex နှစ်ချက်ချောမွေ့ Macd Stochastic Indicator
Forex နှစ်ချက်ချောမွေ့ Macd ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
Forex FanSimple လက်ဝါးကပ်တိုင်လိုင်း Indicator
Forex FanSimple လက်ဝါးကပ်တိုင်လိုင်း ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
Forex iTrend line break Indicator
Forex iTrend line break ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
Forex MACD ဘာဂါ Multi အချိန် Frame ကအညွှန်းကိန်း
Forex MACD ဘာဂါ Multi အချိန် ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
အကောင်းဆုံးအခမဲ့ Forex Trading ၏စနစ်များ
Forex ပြွန်ထရေးဒင်း Indicator
Forex ပြွန်ထရေးဒင်း ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
Forex Bollinger တေးဂီတအဖွဲ့များ 3B Indicator
Forex Bollinger တေးဂီတအဖွဲ့များ 3B ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
Forex Trend စာအိတ် Swing ထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာ
Forex Trend စာအိတ် Swing ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
Forex နေ့အရှိန်အဟုန် Indicator
Forex နေ့အရှိန်အဟုန် ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
Forex သင်္ချာစနစ် Trader Indicator
Forex သင်္ချာစနစ် Trader ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
Forex Merdekerama Wave ကိုထရေးဒင်းစနစ်
Forex Merdekerama Wave ကိုထရေးဒင်း ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
အချက်ပေး Indicator အတူ Forex ATR H1 လိုင်းများ
အတူ Forex ATR H1 လိုင်းများ ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
Forex စူပါ Multi ဇယား Indicator
Forex စူပါ Multi ဇယား ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
အကောင်းဆုံးအခမဲ့ Forex Breakout မဟာဗျူဟာ
Forex H1 Method ကို Breakout ထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာ
Forex H1 Method ကို Breakout ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
Awesome ကို Breakout ထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာ Forex
Awesome ကို Breakout ထရေးဒင်း Forex ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
Forex Trend လိုင်း Breakout ထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာ
Forex Trend လိုင်း Breakout ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
Forex စူပါဇုန် Breakout ထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာ
Forex စူပါဇုန် Breakout ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
Forex Ultimate Pips Breakout ထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာ
Forex Ultimate Pips Breakout ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
Forex Donchian Breakout ထရေးဒင်းမဟာဗျူဟာ
Forex Donchian Breakout ... [ဆက်ဖတ်ရန်...]
အဆင့်မြင့်ညွှန်ပြချက် adx ညွှန်ပြချက် တပ်လှန့်ညွှန်ပြချက် မြှားညွှန်ပြချက် ATR ညွှန်ပြချက် ဘားညွှန်ပြချက် အကောင်းဆုံး mt4 ညွှန်ပြချက် bollinger ခညျြအနှောညွှန်ပြချက် ရောင်းညွှန်ပြချက်မဝယ် ဖယောင်းတိုင်ညွှန်ပြချက် cci ညွှန်ပြချက် ရုပ်သံလိုင်းညွှန်ပြချက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ညွှန်ပြချက် ထုံးစံညွှန်ပြချက် ဒိုင်ခွက်ညွှန်ပြချက် တစ်ရက်ကုန်သွယ်ညွှန်ပြချက် ဦးတည်ချက်ညွှန်ပြချက် အစက်ညွှန်ပြချက် fibonacci ညွှန်ပြချက် fractal ညွှန်ပြချက် အခမဲ့ Forex ညွှန်ပြချက် အခမဲ့ FX ညွှန်ပြချက် အခမဲ့ mt4 ညွှန်ပြချက် histogram ညွှန်ပြချက် Ichimoku ညွှန်ပြချက် သတင်းအချက်အလက်ညွှန်ပြချက် အဆင့်ညွှန်ပြချက် လိုင်းညွှန်ပြချက် macd ညွှန်ပြချက် metatrader4ညွှန်ပြချက် အရှိန်အဟုန်ညွှန်ပြချက် ပျမ်းမျှအားဖြင့်ညွှန်ပြချက်ရွေ့လျား mt4 ညွှန်ပြချက် mtf ညွှန်ပြချက် လှိုညွှန်ပြချက် မဏ္ဍိုင်အချက်များကိုညွှန်ပြချက် စျေးနှုန်းညွှန်းကိန်း တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ညွှန်ပြချက် rsi ညွှန်ပြချက် ဦးရေပြားညွှန်ပြချက် signal ကိုညွှန်ပြချက် stochastic ညွှန်ပြချက် စူပါညွှန်ပြချက် လမ်းကြောင်းသစ်ညွှန်ပြချက် အသံအတိုးအကျယ်ညွှန်ပြချက်
အခမဲ့ Forex Kaufman ယ်ယူရန်လိုင်း Indicator ရောင်း Download!
အခမဲ့ Download Forex Kaufman လိုင်း Indicator ရောင်းဝယ်ပါ!